Translations < Burmese < Twenty Ten < GlotPress Translate WordPress.com
Translation of Twenty Ten: Burmese	Glossary
Filter ↓ • Sort ↓ • All (98) • Untranslated (11) • Waiting (0) • Fuzzy (0) • Warnings (0)
One column, no sidebar	 ကော်လံတစ်ခု၊ ဘေးဘား မပါ	 Details
ကော်လံတစ်ခု၊ ဘေးဘား မပါ
The 2010 theme for WordPress is stylish, customizable, simple, and readable -- make it yours withacustom menu, header image, and background. Twenty Ten supports six widgetized areas (two in the sidebar, four in the footer) and featured images (thumbnails for gallery posts and custom header images for posts and pages). It includes stylesheets for print and the admin Visual Editor, special styles for posts in the "Asides" and "Gallery" categories, and has an optional one-column page template that removes the sidebar.	 WordPress အတွက် ၂၀၁၀ သရုပ်ဖော် မျက်နှာစာ သွင်ပြင်သည် စတိုင်ကျသည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလွယ်သည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင် ဒီဇိုင်း ဖြစ်စေရန် နောက်ခံ၊ ခေါင်းစီးပိုင်း ရုပ်ပုံ နှင့် စိတ်ကြိုက် မီနူး စာရင်းများပြုလုပ်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ နှစ်ဆယ် တစ်ဆယ်မှ ဝစ်ဂျက် ၆ ခုကို ထောက်ပံ့ပေးထားသည် (ဘေးဘက်တွင်နှစ်ခု၊ အောက်ခြတေွင် လေးခု)။ ထို့ပြင် အထူးပြု ရုပ်ပုံ(ပြခန်း စာမူများနှင့် စာမူများနှင့် စာမျက်နှာများအတွက် စိတ်ကြိုက် ခေါင်းစီးပိုင်းရုပ်ပုံများ အတွက် လက်မ အရွယ်ပုံများ)။ ပုံနှိပ်ရန် စတိုင်စာရွက်နှင့် စာမူရေးသားရာတွင် ရှုမြင်ရပုံ အယ်ဒီတာအတွက် စတိုင်စာရွက်၊ "အရန်" နှင့် "ပြခန်း" ကဏ္ဍများအတွက် အထူး စတိုင်များနှင့် ဘေးဘက်ဘားတန်းကို ဖယ်ထုတ်ထားသည့် ကော်လံတစ်ခုသာပါသော စာမျက်နှာ နမူနာပုံစံ(တန်းပလက်)ပါရှိပါသည်။	 Details